Umthandazo wabaPristi Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
La umthandazo wababingeleli yindlela yokubonisa uthando nentlonipho kubantu abasikhokelayo ngokomoya ngaphakathi ebandleni. Abo basinika uvuyo noxolo lwangaphakathi, siyabacela ukuba bomeleze kwaye bakhule ngokobuqu nangokomoya, nakwimpilo yabo kunye nokhuseleko. Kule nqaku siza kukufundisa indlela yokwenza.
1 Umthandazo wokuqala wabaFundisi
2 Isibongozo kuMoya oyiNgcwele
3 Uxwebhu lweNgcweliso
3.1 Umthandazo kuSanta Teresa wababingeleli
3.2 Umthandazo iNtombikazi enguMariya
3.3 Umthandazo kwiNtombi Enyulu Ngcwele
Umthandazo wokuqala wabaFundisi
Owu Nkosi uYesu othandekayo, wena owazincama ngenxa yethu wanikela ngobomi bakho, wena okwiSakramente elisikelelekileyo, kwaye wafuna ukuba naphakade phakathi kwethu ngokuphalaza igazi lakho kweyona nqamlezo ingcwele, Namhlanje sivulela iintliziyo zethu kuwe kwaye thina thandazela ababingeleli, ukuze intetho yabo ibe yeyakho, Nkosi ethandekayo nethandekayo, ukuba kwizenzo zakho sazi ukuba uyathandwa nguYesu Krestu kwaye nakwizenzo zakho uhlala uphelele kwaye uyathuthuzeleka.
Sithandaza phambi kwakho siguqe ngamadolo ukuba ababingeleli bethu babe ngamadoda athetha ngoThixo phambi kwabantu kwaye xa bezifumana bekwizinto ezinyanzelayo kunye nokukhumbula, bathetha ngabantu kuThixo. Siyakucela kulomthandazo wababingeleli, ubagcwalise ngobulumko, Nkosi yam, ukuba bangoyiki nkonzo kwaye bangabashiyi abo baxoshelwe ukuhlala kwinkonzo abayikhethileyo, bangayivumeli iNkosi uYesu.
Banike okushiyekileyo, Nkosi. Benze babe ngababingeleli abazinikele kwinkonzo yecawe, ukuze indlu yakho apho abantwana bakho kunye nabakhonzi bakho bahlanganisane khona ukuze bakhule badumise iNkosi yam. Benze bafaneleke kwilizwi lakho, banomona ngobizo, ukuze babe Nguwe. Sikucela oku egameni likaYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele. Amen
Isibongozo kuMoya oyiNgcwele
UMoya oyiNgcwele, osikhuselayo njengamatakane eNkosi, siyakucela ngokuthobekileyo ukuba ugcwalise umphefumlo wombingeleli (yitsho igama lombingeleli) njengangosuku lokumiselwa kwakhe. Ndiphinde ndive ukuwola kwakho, kwanga ndingaziva kwakhona ingqiniseko kunye nolonwabo endaziva ngalo mini.
Ngamana angaqhubeka nomsebenzi wakhe uhlala evakalelwa luthando kunye noxolo, impilo yakhe ingaze ibe yinto yesiqhelo, angazaliswa yimvakalelo kunye namava amnandi, ahlala ekuvulela iingcango zentliziyo yakhe. Ngamana angasoloko enentando efanayo yokukhonza wena kunye nabanye.
Owu Moya, wena usikhokelayo endleleni yethu sikhonza iNkosi yethu, wena osinika uthando lwakho nangona singasifanelanga isipho esinje, siyasamkela nge-parsimony kwaye sizinika wena umzimba nomphefumlo.
Nceda uvumele ubuthathaka bethu ukuba bube namandla, umoya wakhe ukhule kwaye intliziyo yakhe yande. Wanga umzimba wakho ungaphila kwaye womelele kwaye ungajongana neemeko ezibekwa yiNkosi yakho phambi kwakho ngobabalo nokulunga. Ukuba uvumela umbingeleli wethu ukuba aqonde ububi, ukuba angaxhathisa izilingo, uyawuvalela umphefumlo wakhe esonweni kwaye egameni leNkosi yethu uYesu, angaqhubela phambili kwindlela yokulunga eyayilungiswe ngunyana kaThixo.
Ngoku abantu bakho bafuna usindiso lwakho, Nkosi yam, ke siyacela ukuba ababingeleli bakho balunge kwaye bazinikele. Bancede bazalisekise umsebenzi onzima obaphathise wona, kuba ngaphandle kwamandla akho, ukubamkela kuya kuba nzima ngakumbi yonke imihla. Okokugqibela, siyabulela ngomonde, uthando, inceba kunye noxolelo lwenu. Amen.
INkosi yethu, uYesu. Wena odale ububingeleli ukuze uqhubeke nomsebenzi wakho ongcwele wokusindisa nokuxolela amatakane alahlekileyo endlela yakho, khusela ababingeleli, abo baqhubeka nokuqhuba ukuthanda kwakho ngokunyaniseka emhlabeni, bagcine kwiNtliziyo yakho eNgcwele, unakekele izandla zabo loo mini ngemini chukumisa umzimba wakho kwaye uwunike amakholwa athobela iminqweno yakho ngokuthembeka.
Siyacela kuwe ubawo wasezulwini, ukuba ugcine iintliziyo zabo ezicocekileyo ziqinile nokuba kusebusuku obumnyama obugcwele ngamadabi. Ngamana uthando lwakho lungabakhusela kuyo nayiphi na ingozi abajamelana nayo. Ingcwalisa iiyure zabo zokudinwa kunye nomsebenzi kwaye ivumela usindiso kwabo beza kubo. Amen.
Umthandazo kuSanta Teresa wababingeleli
Owu Saint Teresa, namhlanje ndiyaguqa phambi kwakho kwaye ndiyabulela ngokuzimisela kwakho kunye nokukhonza kwakho uThixo. Ndicela umbingeleli wethu, oye wanikela ngentliziyo yakhe ngenxa yeNkosi yethu uYesu kwaye ndiyakubongoza ukuba uphume kulo naluphi na uhambo okanye idabi elibekwa yiNkosi yakhe. Mncede ukuba athembeke, alungile kwaye athembeke.
Ndithandaza ukuba abantu abaninzi bawuqonde lo msebenzi unzima wobufundisi kwaye banike ingqwalaselo noncedo lwabo, ukuze icawe yam yonke imanyane. Ndicela ngegama lakho. Amen.
Umthandazo iNtombikazi enguMariya
Owu Mariya, Mama weNkosi yethu uYesu Krestu nomama ngokunjalo nababingeleli, wamkela lomthandazo siwuphathise wena namhlanje. Wena wanika uMesiya umzimba ukuba ahlale kuwo, wena ojonga bonke abantwana bakho abasemhlabeni, wena owathi ngokulunga kwakho wanika ithemba kwizifundo zakho.
Wena, mama womsindisi wethu, ogcina ingubo yakho efihla iicawa zethu, obehamba noMntu ekufezekiseni umsebenzi kunye nelizwi likaThixo, thaca kubawo wethu wasezulwini, esi sicelo sisenza kuwe.
Bamkele abantwana bakho ababebizelwe ebubingelelini, ubagcine ngelixa bekhuliswa lulwazi lokusikhokela kwaye ubabambe ngesandla abantwana bakho ebomini babo nakubulungiseleli babo, wena ongumama wabo bonke. Amen.
Intombi enyulu, Unina wabo bonke abantu abahlala emhlabeni, umama kaThixo ekuphela kokhokelo, kuba thina, iimvana zakhe, sicela kwaye sibulela kuye. Namhlanje ngokuzithoba okupheleleyo, sicela ukuba ubakhusele oonyana bakho ababingeleli, baphembe umlilo wothando lukabawo wasezulwini ezintliziyweni zabo.
Vumela ukuba ifudumise imiphefumlo yabo, ibe lidangatye laphakade lothando ngaphakathi kwabo, lusasaze kubo bonke abantu abakungqongileyo. Mayitshise kwaye isuse ubushushu bayo yonke ingqumbo, iinkumbulo ezingavumeli ingqondo yakho ukuba iphumle, ukungakhathali, iziganeko ezibuhlungu eziphazamisayo kunye nokungabikho kothando olunokuthi okanye lungabikho entliziyweni yakho.
Siyakucela Mama Oyingcwele ukuba uvumele ababingeleli bethu baziva uthando lukaThixo lonyana wakho uYesu Krestu kwaye banike uxolelo lwezono zakhe kunye nenkululeko yomphefumlo wakhe. Kwangathi ungabavumela baqhubeke nokwenza uxolelo lukaThixo kulo mhlaba, ngamana abo bathunyelwe ukunika uthando kwimiphefumlo yabalandeli beNkosi baqhubeke behlambulukile. Sithandazela ukuba usikhusele ngonaphakade. Amen.
Siyathemba ukuba le mithandazo isebenza njengesikhokelo sokucela ababingeleli becawe yakho, uhlale ukhumbula ukunyaniseka kwizicelo zakho kwaye uvule intliziyo yakho ukuba iviwe yiNkosi yethu uYesu Krestu. Ukuba ulithandile eli nqaku kwaye beliluncedo, siyakumema ukuba undwendwele amakhonkco acetyiswayo apha ngezantsi:
Umthandazo wokuzola kunye nokuqinisekisa umntu